OnePlus Buds Z နားကြပ် အသစ်ကို မကြာခင် ကြေညာနိုင် – MyTech Myanmar
OnePlus Buds Z နားကြပ် အသစ်ကို မကြာခင် ကြေညာနိုင်
OnePlus က အောက်တိုဘာလ ၁၄ ရက်နေ့မှာ OnePlus 8T တွေကို ကြေညာတော့မယ်လို့ တရားဝင် အတည်ပြုထားပြီးပါပြီ။ အခုတော့ အဲဒီ မိတ်ဆက်ပွဲမှာ OnePlus 8T စမတ်ဖုန်းတင်မကဘဲ တခြား အပေါင်းအပါ ထုတ်ကုန်တွေကိုပါ မြင်ရနိုင်ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီက နားကြပ်အသစ် ၁ ခုကို တွစ်တာမှာ Tease လုပ်လိုက်ပြီး ဓါတ်ပုံမှာ In-ear နားကြပ်ရဲ့ ရာဘာထိပ်ဖူး ဒီဇိုင်းကို အရိပ်အမြွက် ပြသထားပါတယ်။ မကြာခင် ကြေညာမယ်လို့လည်း သတင်းပေးထားပါတယ်။
A whole new world of sound. Coming soon.
— OnePlus (@oneplus) October 1, 2020
Leakster ၁ ယောက် ဖြစ်တဲ့ Max J က OxygenOS 11 Beta Code မှာ OnePlus Buds Z နာမည်ကို တွေ့ရတယ်လို့ ပြီးခဲ့တဲ့ လက သတင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် အခု Tease လုပ်လိုက်တာဟာ OnePlus Buds Z ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လက်ရှိ ရောင်းချထားတဲ့ OnePlus Buds တွေမှာ ပလတ်စတစ်ပဲ သုံးထားပြီး ထိပ်ဖူး မပါပါဘူး။ Bullets Wireless တွေမှာပဲ ရာဘာ ထိပ်ဖူး ပါလာပါတယ်။
ဒါဟာ စည်းမျဉ်း ၁ ခုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ တချို့ TWS နားကြပ်တွေမှာ ထိပ်ဖူး ပါပြီး တချို့မှာ မပါပါဘူး။ ဥပမာပြောရရင် Apple AirPods တွေမှာ ထိပ်ဖူး မပါဘဲ AirPods Pro မှာပဲ ရာဘာ ထိပ်ဖူး ပါပါတယ်။ ထိပ်ဖူးတွေဟာ ပိုပြီး Fit ဖြစ်တဲ့အတွက် ပတ်ဝန်းကျင်က မလိုလားအပ်တဲ့ ဆူညံသံတွေ သိပ်မကြားရပါဘူး။ ဒါ့အပြင် တချို့ နားကြပ်တွေအတွက် မတူညီတဲ့ ထိပ်ဖူး အရွယ်အစားတွေ ထည့်သွင်းပေးထားတဲ့အတွက် သင့်နားနဲ့ ကိုက်ညီတာကို ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။
OnePlus ဟာ စမတ်ဖုန်း ကုမ္ပဏီ အဖြစ် စတင်ခဲ့ပေမယ့် အခုနောက်ပိုင်းမှာ စမတ်တီဗီနဲ့ ကြိုးမဲ့နားကြပ် လောကကိုပါ နယ်ချဲ့လာပါပြီ။ စမတ်ဖုန်း ကုမ္ပဏီ တော်တော်များများဟာ ကြိုးမဲ့နားကြပ်တွေ ထုတ်လုပ်လာကြတဲ့အတွက် ကြိုးမဲ့ နားကြပ် နယ်ပယ်မှာလည်း ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေ ပြင်းထန်လာပါပြီ။
MyTech Myanmar2020-10-02T14:41:18+06:30October 2nd, 2020|News, OnePlus, Wearables|
Xiaomi က ကွာတား ၃ မှာ ဖုန်း အလုံးရေ ၄၆.၆ သန်း စံချိန်တင် ရောင်းချနိုင်ခဲ့
Redmi Note95G Series အပြင် Redmi Smartwatch အသစ်ကိုပါ မိတ်ဆက်မယ့် Xiaomi
Samsung ကနေ Galaxy A12 နဲ့ A02s ဖုန်းတွေကို တရားဝင်မိတ်ဆက်လိုက်ပြီ
အိန္ဒိယ အစိုးရက တရုတ် App ၄၃ ခုကို ထပ်မံ ပိတ်ပင်လိုက်ပြီ
Huawei က Stable EMUI 11 Update ရမယ့် စာရင်းကို ကြေညာ
Redmi Flagship နဲ့ တွဲထွက်လာနိုင်ဖွယ်ရှိတဲ့ Xaiomi ရဲ့ 55W Charger ကို 3C မှာတွေ့မြင်ရ